Baarlamaanka Puntland oo isku diyaarinaya doorashada guddoomiyaha - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandBaarlamaanka Puntland oo isku diyaarinaya doorashada guddoomiyaha
November 9, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Kadib markii golaha baarlamaanka Puntland ay Khamiistii xilka ka qaadeen guddoomiyihoodii, ayaa hadda waxaa socda diyaargarowga doorashada xigta oo la filayo in ay dhacdo dabayaaqada asbuucaan.
Labo xildhibaan ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqaan in ay u tartamayaan sidii ay u badali lahaayeen guddoomiyihii hore, sida ilo-wareedyo ka ag dhow baarlamaanka ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Khamiistii, 49 xildhibaan ayaa u codeysay in xilka laga qaado Cabdixakiin Maxamed Axmed oo loo yaqaan Dhoobo-daareed, kaasoo xafiiska joogay wax ka yar sanad.
Baarlamaanka ayaa maanta soo saaray habraaca doorashada guddoomiyaha, taasoo lagu faray musharixiinta in ay codsiyadooda soo gudbiyaan laga bilaabo Axada oo bishu tahay November 10.
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland cabinet ministers have voted to combine PIA (Puntland Intelligence Army) and PSS (Puntland Security Service) as the Puntland Intelligence and Security Agency (PISA) in its Thursday’s weekly meeting in Garowe. The new [...]
Raysulwasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu ayaa cadeeyay in Israel ay heshiis la gashay wadanka Turkiga si loo soo cesho xiriirka, wuxuu intaas ku daray in heshiiska uu kaalin weyn ka qaadan doono hagaajinta dhaqaalaha dalkiisa. [...]